Khayre oo kulan gaar ah la qaatay Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed – Geelle Magazine
Khayre oo kulan gaar ah la qaatay Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed
caliahmed Posted On March 21, 2020
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre oo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed kulan ku yeeshay xafiiskiisa, ayaa ka wada hadlay dardar-gelinta qorshayaasha looga hortagayo cudurka saf-marka ah ee Coronavirus ama COVID-19.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ugu horreyn dhaqaatiirta ka dhageystay talooyinkooda ku aaddan xakameynta faafitaanka cudurkan, ayaa uga mahadceliyay dadaalkooda ku aaddan bad-qabka bulshada, waxa uuna ku dhiirri-geliyay in ay sii laba jibbaaraan dadaalka ay wadaan.
Kulankan oo ay goob joog ka aheyd Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Marwo Fowsiyo Abiikar Nuur, ayaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa guulaha laga gaaray qorshayaasha dhinaca xakameynta cudurkan, wixii ka dambeeyay markii ay dowladdu billawday diyaar garowga qorshaha looga hortagayo cudurkan.
Marwo Fowsiyo oo kulanka ka warbixisay ayaa caddeysay in si aad ah looga wada hadlay sare u qaadidda wacyi-gelinta bulshada iyo Karaantiilka dadka lagu arko astaamaha lagu garto cudurka coronavirus.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada dadaallo xooggan iyo wacyi-gelin bulsho, oo ay kaga hortageyso cudurkan dilaag ah ee corona.
Fayruska Corona oo wax ka badalay xaaladda dalka Aljeeriya